Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာ အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Cancer-Fighting Foods ကင်ဆာ အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာ
7. Tea's Anticancer Potential
Green tea လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဟာ ကင်ဆာ တိုက်ဖျက်ရာမှာ ကောင်းတယ်လို့ လူပြောများနေတယ်။ သက်သေပြစရာ သိပ်စုံသေးတာ မဟုတ်ပါ။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းတော့ Colon အူးမကြီး၊ Liver အသဲ၊ Breast ရင်သား နဲ့ Prostate ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေကို ပြန့်ပွါးတာ နှေးစေတယ်။ Lung အဆုပ် နဲ့ Skin အရေပြားတွေလဲ အတူတူဘဲ။ Bladder ဆီးအိမ် stomach အစာအိမ် နဲ့ Pancreatic သရက်ရွက် ကင်ဆာတွေအတွက်လဲ အတူတူဘဲ။
Broccoli မုံလာစိမ်း၊ Cauliflower မုံလာပွင့်၊ Cabbage မုံလာထုပ်၊ Brussels ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ် Sprouts အစို့အညှောင့် နဲ့ Kale ကိုက်လန်တွေ အားလုံးဘဲ။ Colon အူမကြီး၊ Breast ရင်သား၊ Lung အဆုပ် နဲ့ Cervix သားအိမ်ဝ ကင်ဆာ တွေအတွက် ကောင်းတယ်။
19. Don't Rely on Supplements ဗီတာမင်တွေက ကောင်းပါတယ်။